DEG DEG : Sargaal ka tirsan Al Shabaab oo Goordhow la toogtay | Nabadqaad Online
DEG DEG : Sargaal ka tirsan Al Shabaab oo Goordhow la toogtay
Wararka ka imaanaya Degmada Qoryooley ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowlada gaar ahaan kuwa Militeriga ay dileen Sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Dilka ayaa ka dhacay duleedka Deegaanka Buulo Sheekh oo ka tirsan Degmada Qoryooley dilka ayaa yimid ka dib markii ciidamada Dowlada ay rasaas ku fureen gaari yar oo ay saarnaayeen Shabaabku kaas oo marayey meel ku dhow Buulo sheekh.
Sargaal ka tirsan Dowlada oo la hadlay Nabadqaad.com ayaa xaqiijiyey in Ciidamada ay ka shakiyeen Gaariga yar islamarkaana ay ciidamada amreen in ay istaagaan oo darawalka gaariga joojiyo balse ay ka dhego adeegeen iyagoo isku dayey in ay dagaalamaan.
balse Sargaalka ayaa sheegay inta aysan ka soo degin Maleeshiyada gaariga in ciidamada ay rasaas ku rideen halkaasna uu ku geeriyooday Mid ka mid ah ragii saarnaa gaariga kaas oo ahaa Sargaal sare oo ka tirsanaa Shabaab.
Meydka Sargaalka oo rasaasta ay ka haleshay Qeybaha sare ee jirka ayaa waxaa la baxsaday Kooxdii gaariga wadatay kadib is rasaaseen Kooban oo iyaga iyo Ciidamada Dowlada dhexmartay.
Ciidamada Dowlada ayaa hadda Howlgal ka wada Deegaanada ku dhow halkii ay ka dhacday is rasaaseenta, Goobta ay ciidamada iyo shabaabku isku rasaaseeyeen ayaa aheyn bar koon tarool balse waa meel xiliyada qaar ay ciidamada jid gal ahaan ugu istaagaan shabaabku.